Iimbono zaseAfrika kuPhononongo loontanga: Ingxoxo ejikelezayo- iAfricArXiv
E papashwe ngu UJohanssen Obanda on 15ti Septemba 2021 15ti Septemba 2021
I-AfricArXiv, Eider Afrika, I-TCC yase-Afrika, yaye Jonga kwakhona Ndonwabile ukubamba ingxoxo emfutshane yemizuzu engama-90, izisa umbono wase-Afrika kwincoko yehlabathi kule minyaka '. IVeki yokuHlolwa koontangaUmxholo, "Isazisi kuPhononongo loontanga". Sikunye nesigqeba esinezifundo ezininzi sabahleli baseAfrika, abavavanyi kunye nabaphandi bamakhondo okuqala, siza kuphonononga ukutshintsha kwesazisi sabaphandi kwilizwekazi laseAfrika, ngokwembono ebonakalayo ebabona njengabathengi bolwazi oluveliswe kwezinye iimeko kubaphandi abazinikeleyo kuphononongo loontanga. Siza kuzama ukudala indawo ekhuselekileyo yokubonisa imiba yolwazi lobukoloniyali, ukuthathela ingqalelo uphononongo loontanga, kunye neendlela ezivulekileyo zokuphononongwa koontanga.
Iimodareyitha ziya kumema izithethi ukuba zizazise ngokwabo kwaye babelane ngamava abo, izixhobo, kunye nezifundo abazifundileyo kuthethathethwano lwabo nenkqubo yokuphononongwa koontanga. Ukulandela ukwaziswa kwezithethi zeendwendwe, siza kungena kwiseshoni ye-Q & A emiselweyo apho abathathi-nxaxheba abajikelezayo bayamenywa ukuba babuze imibuzo, banike izimvo, kwaye bazibandakanye nezithethi.
NgoLwesithathu kaSeptemba 22, 2021
2pm - 3:30 pm GMT | 3pm - 4:30 pm WAT | 4pm - 5:30 pm CAT | 5pm - 6:30 pm EAT
UGqirha Raoul Kamadjeu -Umseki-mbumbulu kunye noMhleli woLawulo ku Ijenali yezonyango yase-Pan-Afrika-iPAMJ
UGqirha Raoul Kamadjeu ngugqirha, umseki-mbumba kunye nomhleli ophetheyo wePan African Medical Journal, indawo yokupapasha evulekileyo eseKenya naseCameroon. UGqirha Kamadjeu ufumene isidanga sobugqirha eCameroon, ugqibe iMasters kwiMpilo kaRhulumente eBelgium (ULB), kwaye kutshanje ubhalise kwi-Ph.D. Inkqubo kwi-Epidemiology kunye neDyunivesithi yaseNew York.
UGqirha Stella Onsoro -Uphandi kunye nengcali yezengqondo kwiKenya Power and Lighting Company - KPLC
UGqirha Stellah Osoro Kerongo yingcali yezengqondo kunye nomphandi ozinze eNairobi, Kenya. Uyingcali yezengqondo eqeqeshiweyo enamava obuchule ekucebiseni, ekuqeqesheni nasekucebiseni. Unobuchule obukhethekileyo kulwimi lokuthetha ngezandla. Uneminyaka engaphezu kwe-10 yamava ekunikezeleni ngeenkonzo zokucebisa.
UNicholas Outa -UMgqatswa oGqirha kwezokuLoba kunye nezoLwandle kwiYunivesithi yaseMaseno
Umnumzana uNicholas Outa nguMgqatswa woGqirha kwicandelo lezokuLoba kunye nezoLwandle kwiYunivesithi yaseMaseno, eKenya. Ufumene isidanga se-Master's Science (MSc) kwiLimnology kunye noLawulo lweMigxobhozo kwi-UNESCO-IHE, eNetherlands, kwiYunivesithi yaseBOKU, e-Austria nase-Egerton University, eKenya. Ukwanayo ne-BSc. I-Applied Science ye-Aquatic kwiYunivesithi yase-Egerton, eKenya. Umnumzana Outa upapashe ngaphezulu kwama-25 amanqaku enzululwazi kwiijenali ezijongwe ngoontanga. Okwangoku, ungumqeqeshi kwezeNzululwazi kwezoBhala noNxibelelwano kwiZiko loQeqesho kunxibelelwano (i-TCC-Afrika) kunye nomcebisi kubaphandi bamakhondo okuqala kwiiyunivesithi ezahlukeneyo nakwiikholeji apho afundisa khona. LinkedIn
UNjingalwazi uRuth (BARWA) Oniang'o PhD -Umhleli-oyiNtloko kunye noMsunguli kwiJenali ye-Afrika yoKutya, ezoLimo, isondlo kunye noPhuhliso (AJFAND)
Ugqirha Ruth Oniang'o ngunjingalwazi, umphandi, uMvuzo we-African Food Prize kwaye uzukisiwe ngurhulumente wakhe waseKenya ngomsebenzi wakhe wokuphelisa intlupheko nendlala eKenya, ngokusebenza namafama asakhasayo kule minyaka ingama-3 idlulileyo kwaye enceda qulunqa imigaqo-nkqubo yokhuseleko lokutya nesondlo. Ufumene iMedali yeSilver Star kunye neeMbasa zeNkonzo eziDumileyo. URuth waseka iRural Outreach Africa (ROA) kwii-1990s zokuqala kwaye uyaqhubeka nokuba lilizwi elicacileyo nelinzulu kuphando lophuhliso njengomcebisi welinye ilizwe kunye nesithethi. Njengomsunguli nomhleli weJenali ye-Afrika yokutya, ezolimo, isondlo kunye nophuhliso (i-AJFAND), uRuth ufuna ukuphucula umgaqo-nkqubo kunye nokwenza izigqibo ngokusasaza iziphumo zophando zesayensi kunye neetekhnoloji ezivelayo ebaleni, ukuze ke asebenze njengempembelelo kwilizwekazi nakwilizwe jikelele. Ijenali iphawula iminyaka engama-20 kulo 2021 okoko yaqalayo.
Malunga neVeki yoPhononongo loontanga
IVeki yoPhononongo loontanga sisiganeko sonyaka esikhokelwa luluntu esenzeka minyaka le sibhiyozela indima ebalulekileyo edlalwa ngoontanga ekulondolozeni umgangatho wobunzululwazi. Umnyhadala udibanisa abantu, amaziko, kunye nemibutho ezinikele ekwabelaneni ngomyalezo ophambili wokuba uphononongo olulungileyo loontanga, nokuba loluphi uhlobo okanye uhlobo olunokuthi luthathe, lubalulekile kunxibelelwano lwabaphengululi.
Iveki yoPhononongo loontanga 2021 Umxholo: Isazisi kuPhononongo loontanga
Kulo nyaka IVeki yokuHlolwa koontanga (PRW), umsitho waminyaka le okhokelwa ngabapapashi bezemfundo, amaziko, imibutho yoluntu kunye nabaphandi, uza kunikezelwa kumxholo othi "Isazisi kuPhononongo loontanga." Ngexesha leveki kaSeptemba 20 ukuya ku-24, imibutho ethatha inxaxheba iya kuququzelela iminyhadala kunye nemisebenzi yokuqaqambisa indima yesazisi kunye nesentlalo kuphononongo loontanga kunye neendlela uluntu lwabafundi olunokuthi lukhuthaze iindlela ezahlukeneyo zokuphononongwa koontanga.
I-AfricArXiv yindawo yokugcina ekhokelwa luluntu ekhokelela kulwakhiwo lwamagcisa aphangaleleyo aphethwe ngabantu baseAfrika; a ulwazi oluqhelekileyo Yomphengululi wase-Afrika usebenza ukukhuthaza Ukuhlaziywa kweAfrika. Sisebenzisana neenkonzo zokugcina izinto ezifundiswayo ukubonelela ngeqonga lezazinzulu zaseAfrika zalo naluphi na uqeqesho ekunikezeleni ngeziphumo zophando lwazo nokunxibelelana nabanye abaphandi kwilizwekazi laseAfrika nakwihlabathi jikelele. Fumanisa ngakumbi ngeAfrArAriv kwi https://info.africarxiv.org/
Eider Afrika ngumbutho oqhuba uphando, uyilo lwentsebenzo kunye nezixhobo ezisebenzisanayo, ngaphandle kweintanethi nakwiinkqubo zokucebisa ngezophando kubafundi baseAfrika. Siqeqesha abacebisi ukuba baqale iinkqubo zabo zokucebisa. Sikholelwa ekufundeni koontanga, ukufunda uphando ngokwenza, ukukhathalela umphandi wonke kunye nokufunda ubomi bonke. Sikhule siluluntu oludlamkileyo lwabaphandi kwiiklabhu zethu zejenali zophando kwaye sisebenza nabahlohli baseyunivesithi ukuphuhlisa uqeqesho kuphando olubandakanyayo. Iwebsite yethu: https://eiderafricaltd.org/
IZiko loQeqesho kunxibelelwano (TCC Africa) liziko lokuqala loqeqesho olusekwe e-Afrika ukufundisa izakhono zonxibelelwano ezisebenzayo kwizazinzulu. I-TCC Afrika yi ibhaso lokuphumelela Itrasti, esekwe njengeziko elingenzi nzuzo ngo-2006 kwaye ibhaliswe eKenya. I-TCC Afrika ibonelela ngenkxaso kumandla ekuphuculeni iziphumo kunye nokubonakala ngoqeqesho ku ngabafundi kwaye unxibelelwano lwezenzululwazi. Fumana okunye malunga ne-TCC Afrika e https://www.tcc-africa.org/about.
Jonga kwakhona yiprojekthi evulekileyo exhaswa ngezimali ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo Ikhowudi yeSayensi kunye noMbutho. Injongo yethu kukuzisa ubulungisa ngakumbi kunye nokwenza izinto elubala kwinkqubo yovavanyo yoontanga. Siyila kwaye siphuhlise iziseko zomthombo ovulekileyo ukuze sikwazi ukunika ingxelo eyakhayo kwimikhombandlela, siqhuba iinkqubo zokuphononongwa koontanga kunye neenkqubo zoqeqesho, kwaye sisebenzisana nemibutho enomdla ofanayo ukulungiselela iminyhadala ebonelela ngamathuba kubaphandi ukuba benze ukusebenzisana okunentsingiselo kunye nokunxibelelana boyise imiqobo yenkcubeko kunye nejografi. Funda nzulu malunga nokujonga kwangaphambili kwi https://prereview.org.
iindidi:	iZazisoUkudibanaumcimbiXa u
tags: Eider AfrikaIVeki yokuHlolwa koontangaJonga kwakhonaCinezelaI-TCC yase-Afrika
Uphononongo lwangaphambili lwe-Eider Africa, i-AfricArXiv, kunye ne-TCC Afrika baphuhlisa ikhosi yokubandakanya abaphandi abaninzi base-Afrika kuphononongo loontanga-AfricArXiv	· Nge-7 kaDisemba 2021 ngo-3:35 am
[…] Iprojekthi ilandela uthotho lweendibano zocweyo ezinamacandelo amathathu kwakunye nengxoxo yamva nje engqukuva eququzelelwe ngokudibeneyo yi-TCC Africa, i-Eider Africa, i-AfricArXiv, kunye ne-Prereview kwaye ihambelana […]